Ny Tontolon’ny Bilaogy Syriana, Lavitry ny Pôlitika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2018 16:04 GMT
Atomboka amin'i Soraya, mpankafy zavakanto miresaka momba ilay Fetiben'ny Jazz natao tamin'ity volana ity tao amin'ny tanànan'i Damaskôsy fahiny, miaraka amin'ireo tarika niakatra an-tsehatra tao amin'ny Manda navaozina ao Damaskôsy sy lalina tany anelakelantranon'i Damaskôsy Fahiny.
Raisina ho tokana ao Afovoany Atsinanana ny Ôrkesitra Jazz Soisa-Syriana. Ary nosoratana sy narindran'ireo mpamoronkira maro malaza maneran-tany ny feonkirany, anisan'izany i Like Frank Kalberg (Finlandy), i Amadis Duncal sy i Oliver Verdle (Soisa), ary i Allen Johnson (Etazonia). Ahitàna mpitendry zavamaneno 42 mizara ho mpikambana Syriana sy Soisa ny Ôrkesitra Jazz (ilay tarika lehibe).
Manana fandalinana tsara momba ny iray amin'ireo boky manan-danja indrindra ao amin'ny Tantaran'i Syria, mitondra ny lohateny hoe Steel and Silk…, i Abu Kareem:
Misy dikanteny ny asasoratr'i Sami Moubayed, ahitàna pejy 623: ireo lehilahy sy vehivavy nandrafitra an'i Syria tamin'ny 1900-2000. Mirakitra fohifohy ny mombamomba an'ireo Syriana 341 tsapan'i Moubayed fa nanana akony lehibe indrindra -na tsara na ratsy- teo amin'ny tantaram-pirenena. Mandrafitra ny mombamomba ireo olo-malaza avy amin'ny endrika rehetra hitam-bahoaka izy, anatin'izany ireo mpanao pôlitika, miaramila, mpiasam-panjakàna, mpanabe, ary mpanoratra.
Mizara tsidika kanto naharitra adiny iray avy any amin'ny tanindrazany tao Tartous hatrany al-Swanda i Abu Fares, miaraka aminà tontolo mahavariana.
Raha nanana adiny iray an-tànana aho ka namela ahy hitondra fiara ny toetrandro, zotra azo atao ny miala an'i Tartous avy aty avaratra dia mizotra mankany Al-Sawda, 12 km mianavaratra atsinanana. Mandalo ny Faritra Indostrialy Afa-kaba aho ary manohy mahitsy any amin'ny araben'i Tartous-Lattakia fahiny. 3 km miala eo, tonga eo aminà fiampitàna lalamby sy tetezana eo ambonin'i Nahr Al-Hsein (نهر الحصين) aho.
Manohy aminà resaka matotra kokoa, miresaka momba ny fomba hiadian'i Israely ny Horohoro amin'ny Horohoro i Brian Anthony, avy amin'ny fomba fijerinà teratany Britanika mipetraka any Damaskôsy…
“Aza manakaiky an'i Yarmouk mihitsy,” hoy ny mpiara-miasa amiko nampitandrina ahy, nanozongozona ny fanondrony.
“Fa maninona?” hoy aho, nanontany tena momba ny zava-mitranga any amin'ny tobin'ny mpitsoaponenana Palestiniana ivelan'ny tanàna. Henoko fa nisy fihetsiketsehana tany roa andro lasa izay.
Farany, faranantsika amin'ny tosan-kevitr'i Omar, antsoina hoe Eritreritra Ravarava …
tokony hisy lalàna manohitra ny olona liana tampoka amin'ny pôlitika iraisam-pirenena…tsy tokony hahazo hiady hevitra momba ireo raharaha farany ianao mandra-pijerinao vaovao iraisam-pirenena mandritra ny 180 ora fara-fahakeliny…(izany hoe, aza mijery vaovao tselatra eo an-tenatenan'ny fizaràna roa an'ireo tantara mitohy “law and order” sy “CSI Miami” ary avy eo miresaka momba ny fandrahonan'ny fampihorohoroana iraisam-pirenena.